सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी कुन नेताले चुनाव जित्दैछन र कुन नेताले हार्दैछन् ? (भिडियो हेर्नुहोस) – Complete Nepali News Portal
मध्यारातमा भूतले तर्सायो करिश्मालाई, नपत्याए एकचोटी हेर्नुहोस यो भिडियो
सनसनीपूर्ण भविष्यवाणी कुन नेताले चुनाव जित्दैछन र कुन नेताले हार्दैछन् ? (भिडियो हेर्नुहोस)
November 14, 2017	5,601 Views
सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्विटरमा बहु चर्चित नाम हो मुकुन्द घिमिरे । सबैले मुकुन्दे भनेर चिन्ने मुकुन्द घिमिरे केहि बर्ष अगाडिसम्म सत्नपार्कको रुखमाथि बसेर भाषण गर्ने गर्थे । रत्नपार्कलाई सरकारले व्यवस्थापन गरे संगै रत्नपार्कलाई छाडेका मुकुन्दे हिजोआज फेसबुक र ट्विटरमा मज्जाले जमेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमा मुकुन्देको २ वटा आईडि मध्ये एउटामा फ्रेण्ड लिमिट भन्दा धेरै २० हजार ६ सय र अर्को आईडिमा २४ हजार ७ सय २ जनाले मुकुन्देलाई फलो गरेका छन् । ट्विटरमा भने मुकुन्देलाई २६२ K ले फलो गरेका छन् ।
मुकुन्देका कुराहरुलाई अधिकांशले मनोरन्जनको रुपमा लिएपनि बेला-बेलामा सत्य सावित पनि हुने गरेको छ । केहि समय अगाडिको स्थानिय चुनावको समयमा मुकुन्देले भनेका थिए ” मधेशको चुनाव पछाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आफ्नो पार्टि विघटन गर्छन्” भनेर भनेका थिए । आज माओवादी केन्द्र पार्टि विघटन नभएपनि वाम एकता भनेर नेकपा एमाले संग पार्टि एकता गर्ने पहल गरिंदै छ । यदि पार्टि एकता नै भईहालेमा माओवादी केन्द्र र एमाले दुबैको नाम भन्दा थोरै फरक नेकपा मात्रै राख्ने चर्चा आईरहेको छ ।
पहिलो चोटी आयो जलजला परियारको सारा संगीत जगत रुवाउने मेसेज (भिडियोमा)
म घर बाट मर्न हिडेको मान्छे, आज ४२ जना अनाथ बाल बालिका हरु संग जोडिन पुगे यसरी (भिडियो सहित)
अहिले हामी आँधी आउनु अघि को सन्नाटामा छौं, आँधी आए पछीको सन्नाटा हेर्न अझै बाँकी नै छ – रामप्रसाद खनाल
दिपिका भुसाल भन्छिन : बिदेशिएका चेलीको चरित्र हेर्ने नेपाली समाज
पहिलो भेटमै जाड रक्सि चुरोट छोडे : माता सबिता संगको कुराकानी भिडियो
March 3, 2017	189,359
April 28, 2017	118,090
February 26, 2017	114,450
January 9, 2017	113,355
March 21, 2017	105,176
March 24, 2017	105,176
April 26, 2017	105,002
April 19, 2017	96,764
April 17, 2017	90,836